Induction Kiimikada Soosaarayaasha Kuleylinta Maraakiibta Nidaamka, Kaydinta, Haamaha
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Fal-kuliyaha Kuleylka Induction / soosaarayaasha kiimikada
Category: Fal-kuliyaha Kuleylka Induction Tags: Kiimikada Kiimikada Kuleylka, Maraakiibta kululeeya shidaalka, kululeeyaha fal-galiye kiimikada, kululaynta maraakiibta kiimikada, kululeeyaha kululeynta kiimikada, Isweydaarsigayaasha Kuleylka Kuleylka, kululaynta kuleylka, Maraakiibta Cadaadiska kululaynta, Geedi socodka Maraakiibta kululaynta, Dejinta Haamaha Kuleylka, kuleyliyaha kululaynta, Vapourisors Kulaylinta, maraakiibta kululaynta
Induction Kiimikada Soosaarayaasha kululaynta-Maraakiibta Kiimikada Kuleylka
Kuleylka kuleylka kuleyliyaha kuleylka Reactors iyo Kettles, Autoclaves, Messels Process, Kaydinta iyo Dejinta Haamaha, Qubeyska, Vats iyo Weli Weelasha, Maraakiibta Cadaadiska, Vapourisors iyo superheaters, Heat Exchangers, Rotary Drums, Pipes, Dual Fuel Heledels Maraakiibta iyo maraakiibta kiimikada ayaa ah kuwa ugu sarreeya kuleylka saxda ah Habka loo heli karo wax kasta oo ka shaqeynaya dheecaanka.
Waxaan leenahay mashiinka kululaynta induction 1 KW ~ 500KW. Heerkulka kululaynta 0 ～ 650 C. Waxaan u sameyn karnaa mashiinka kuleylka kuleylinta ku habboon nooc ka mid ah falanqeeyayaasha.
Faa'iidada kuleylka kuleylka ee kuleylka kuleylka:
1. Si dhakhso leh u kululaynta xawaaraha leh saamaynta kululaynta sare
2. Xiriir jireed malaha inta u dhexeysa isku xirxiraha dabka iyo darbiga weelka kululeeya
3. Bilaabis degdeg ah iyo xirid; ma laha firfircooni kuleyl ah
4. Kuleylka oo yaraada
5. Wax soosaarka saxda ah iyo xakamaynta heerkulka gidaarka maraakiibta iyada oo aan la dhaafin wax toogasho ah
6. Gelinta tamar sare, oo ku habboon xakamaynta otomaatigga ama micro-processor
7. Aag halista oo ammaan ah ama hawlgal warshadeed oo caadi ah oo xarig danab ah
8. Kuleylka labiska wasakhaysan ee wasakhaysan ee waxtarka sare leh
9. Qiimaha socodka oo hooseeya
10. Heerkul hoose ama sareeya
11. Si fudud oo dabacsan oo loo hawlgalo
12. Dayactirka ugu yar
13. Tayada wax soo saarka oo joogto ah
14. Kuleyliyaha waa mid iskiis u kooban oo leh shuruudaha ugu hooseeya ee dabaqa
15. Badbaado iyo xasilooni leh 24 saacadood oo shaqeynaya & In ka badan 10 sano nolosha shaqada
Naqshadeynta kuleylka kuleylka kuleylka ayaa loo heli karaa si loogu waafajiyo markabka macmalka ah iyo taangiyada qaababka iyo qaababka badankood oo u dhexeysa dhowr sentimitir ilaa dhexroor mitir ama dherer ah. Bir khafiif ah, bir khafiif ah oo qafilan, bir bir ah oo adag ama maraakiibta aan birta ahayn ayaa si guul leh loo kululeyn karaa. Guud ahaan dhumucda darbiga ugu yar ee 6 ~ 10mm ayaa lagula talinayaa.
The Mashiinka kuleylka ee kuleylinta induction waxaa ka mid ah:
1. awoodda kululaynta induction
2. Kuleylka kuleylka kuleylka
3. Kordhi fiilada
4. Nooca kuleylka iyo wixii la mid ah.
Kuleylka kuleylintu wuxuu bixiyaa faa iidooyin aan laga helin nidaamyada kale: hagaajinta waxsoosaarka waxsoosaarka dhirta iyo xaalado shaqo oo wanaagsan oo aan kuleylka kuleylka ee hareeraha ka jirin.
Warshadaha caadiga ah ee isticmaalaya kuleylka habka kuleylka:
• Soosaarayaasha iyo ketteriyada.
• Koolo dhejis ah iyo mid gaar ah.
• Kiimiko, gaas iyo saliid.
• Ka shaqaynta cuntada.
• Dhamaystirka birta iyo birta iyo wixii la mid ah.
HLQ Soosaarida Qalabka Kiimikada Qalabka Soosaaraha
Waxaan leenahay khibrad 20 sano ka badan kululaynta induction oo soo saaray, naqshadeeyay, soo saaray, rakibay oo loo xilsaaray nidaamyada Vessel iyo Pipe kuleylka dalal badan oo adduunka ah. Nidaamka kuleylka oo dabiici ahaan fudud oo aad loogu kalsoonaan karo, xulashada kuleylka ee kuleylka waa in loo tixgeliyaa doorashada la doorbiday. Kuleylinta kuleylintu waxay ka kooban tahay dhammaan waxyaabaha ku habboon ee korantada toos loogu qaado geedi socodka loona beddelay kuleylka sida saxda ah ee looga baahan yahay. Waxaa si guul leh loogu dabaqi karaa shixnad kasta oo ah weel ama nidaam tubbo ah oo u baahan ilo kuleyl ah.
Soo-saariddu waxay bixisaa faa'iidooyin badan oo aan lagu heli karin habab kale waxayna siineysaa wax-soo-saarka wax-soo-saarka dhirta oo hagaagsan iyo xaalado shaqo oo wanaagsan tan iyo markii aysan jirin wax kuleyl ah oo kuleyl ah hareeraha. Nidaamku wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay geedi socodka falcelinta xakamaynta dhow sida soosaarka miraha dardaaranka ee aagga Khatarta.
Sida mid waliba weelka kululaynta induction waa mid ku xiran macaamiisha kasta baahiyo gaar ah iyo baahiyo gaar ah, waxaan bixinnaa cabbiro kala duwan oo leh heerar kala duwan oo kuleyl ah. Injineeradeenu waxay soo mareen sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan horumarinta caadooyinka la dhisay nidaamyada kuleylka kuleylka oo loogu talagalay barnaamijyo badan oo kala duwan oo warshado kala duwan ah. Kululeeyayaasha waxaa loogu talagalay inay ku habboon yihiin shuruudaha saxda ah ee geeddi-socodka waxaana loo dhisay si dhakhso leh loogu dhejiyo markabka shaqadeena ama goobta.
• Xiriir jireed malaha inta u dhexeysa isku xirxiraha induction iyo darbiga weelka kululaeya.
• Bilaabid degdeg ah iyo xirid. Ma jiro firfircooni kuleyl ah.
• Kuleylka oo yaraada
• Wax soosaarka saxda ah iyo xakamaynta heerkulka derbiga markab bilaa xabad ah.
• Tamar gelinta sare. Ku habboon xakamaynta otomaatigga ama micro-processor
• Aag khatar ah ama hawlgal warshadeed oo heerkiisu sareeyo.
• Kuleylka labiska wasakhaysan ee wasakhaysan wasakhda wax ku oolka ah.
• Qiimaha socodka oo hooseeya.
• Heer-kul hoose ama sareeya oo shaqeynaya.
• Si fudud oo dabacsan loo hawlgeli karo.
• Dayactirka ugu yar
• Tayada wax soo saarka ee joogtada ah.
• Kuleyliyaha iskiis-u-saaran markab dhaliya shuruudaha ugu hooseeya ee dabaqa.
Naqshadeynta kuleylka kuleylka kuleylka ayaa loo heli karaa si loogu waafajiyo maraakiibta birta ah iyo taangiyada noocyada iyo qaababka badankood ee hadda la isticmaalo. Waxay u dhexeeysaa dhowr xarumood illaa dhexroor mitir ama dherer ah. Bir khafiif ah, bir khafiif ah oo jilicsan, bir bir ah oo adag ama maraakiibta aan birta ahayn dhammaantood si guul leh ayaa loo kululeyn karaa. Guud ahaan dhumucda darbiga ugu yar ee 6mm ayaa lagula talinayaa.
Naqshadaha qiimeynta cutubku waxay u dhexeeyaan 1KW ilaa 1500KW. Nidaamyada kululaynta induction ma jiraan wax xadidan oo ku saabsan soo gelinta cufnaanta awoodda. Xaddidaad kasta oo jirta waxaa lagu soo rogaa awoodda ugu badan ee nuugista kuleylka ee badeecada, habka ama astaamaha birta ee maaddada gidaarka weelka.
Kuleylinta kuleylintu waxay muujineysaa dhammaan waxyaabaha ku habboon ee korantada toos loogu qaado geedi socodka loona beddelay kuleylka sida saxda ah ee looga baahan yahay. Maaddaama kuleylintu ay si toos ah uga socoto darbiga markabka ee lala xiriiro sheyga iyo kuleylka kuleylka ayaa aad u hooseeya, nidaamku waa mid aad waxtar u leh (illaa 90%).
Kuleylka kuleylintu wuxuu bixiyaa faa'iidooyin badan oo badan oo aan lagu heli karin habab kale wuxuuna siinayaa waxsoosaarka waxsoosaarka dhirta iyo xaalado shaqo oo wanaagsan tan iyo markii aysan jirin wax kuleyl ah oo kuleyl ah hareeraha.
• Soosaarayaasha iyo ketteriyada
• Koolo dhejis ah iyo mid gaar ah
• Kiimiko, gaas iyo saliid
• Ka shaqaynta cuntada
• Dhaxgalka biraha iyo birta
• Alxanka Hortiis
• Kuleylka kuleylka ah
Rakibid & Taam la'aan
• Golaha kuleylka
• Qallajinta cuntada
• Kuleylinta Dheecaanka Dhuumaha
• Haanta & Maraakiibta kululaynta iyo kuleylka
Nidaamka kululeeyaha ku-shubashada HLQ ee gudaha waxaa loo isticmaali karaa codsiyada waxaa ka mid ah:
• Kulaylinta hawada iyo gaaska ee kiimikada iyo warshadaynta cuntada
• Kuleylka saliida kulul ee howsha iyo saliidaha la cuni karo
• Uumi-saarista iyo Kulaylinta: Kordhinta uumiga isla markiiba, heerkulka / cadaadiska hooseeya iyo sarreeya (illaa 800ºC ee 100 bar)
Mashaariicdii hore iyo Kuleyliyaha Sii Socda waxaa ka mid ah:
Reactors iyo Kettles, Autoclaves, Maraakiibta nidaamka, Kaydinta iyo Dejinta Haamaha, Qubeyska, Vats iyo Weli Weelasha, Maraakiibta Cadaadiska, Vapourisors iyo superheaters, Heat Exchangers, Rotary Drums, Pipes, Dual Fuel Wears Weels
Mashruuca Kuleyliyaha In-Line-ka ee hore waxaa ka mid ah:
Cadaadiska kululeeyayaasha kuleylka leh ee kuleylka leh, kuleylka hawada ee dib u cusbooneysiiya, saliidaha saliidda saliidda, saliidda la cuni karo iyo kululeeyayaasha saliidda karinta, kululeeyayaasha gaaska oo ay ku jiraan nitrogen, nitrogen Argon iyo kuleyliyaha Catalytic Rich Gas (CRG).
Kuleylka induction waa hab aan lala xiriirin oo xulasho ahaan kululeynaya qalabka korontada ku shaqeeya iyada oo la adeegsanayo aag magnet ah oo beddelaya si loo kiciyo koronto, oo loo yaqaan 'eddy current', oo ah maaddada, oo loo yaqaan qalabka wax lagu dhejiyo, taas oo markaa kuleylka qalabka. Kuleylka kuleylka ayaa loo isticmaali jiray warshadaha qashinka muddo sanado ah ujeedada kuleylka biraha, tusaale ahaan dhalaalida, sifeynta, daaweynta kuleylka, alxanka, iyo kabida. Kuleylinta kuleylka waxaa lagu dhaqmaa in badan oo mowjadyo kala duwan ah, laga soo bilaabo inta jeer ee korantada AC inta ka hooseysa 50 Hz illaa inta jeer ee tobanaan MHz ah.
Marka la eego joogtaynta soo-saarista, kuleylka kuleylka ee aagga soo-baxa wuxuu kordhayaa marka dariiqa wadida ee dheer ay ku jirto shay. Qaybaha waaweyn ee shaqada adag waxaa lagu kululeyn karaa mowjadaha hoose, halka walxaha yaryar u baahan yihiin mowjadyo sare. Shayga cabirka la siiyay si loo kululeeyo, soo noqnoqoshada aadka u hooseysa waxay siisaa kuleyl aan fiicnayn maaddaama tamarta ku jirta berrinka soo-baxa uusan dhalinaynin xoogga la doonayo ee qulqulatada eddy ee shayga. Soo noqnoqoshada aad u saraysa, dhanka kale, waxay keentaa kululayn aan isku mid aheyn maaddaama tamarta ku jirta goobta soo-dhex-dhexaadintu aysan dhex-gelin shayga sheyga oo durdurrada qulqulaya ayaa kaliya lagu soo rogaa ama ku dhow dusha sare. Si kastaba ha noqotee, kuleylka kuleylka ee qaababka macdanta-gaaska laguma yaqaan farshaxanka hore.
Nidaamyada farshaxan ee hore ee falcelinta falcelinta kicinta wajiga gaaska waxay u baahan tahay in kalluumeysahu leeyahay aag sare oo dherer ah si ay meculeelladaha gaaska fallanqeeyaa u lahaadaan xiriirka ugu sarreeya dusha kalluumeysiga. Nidaamyada farshaxan ee hore waxay caadi ahaan isticmaalaan walxo wax soo saar leh ama qaybo badan oo wax soo saar leh, oo si ku habboon loo taageeray, si loo gaaro aagga loo baahan yahay. Nidaamyadan farshaxan ee hore waxay ku tiirsan yihiin tabinta, shucaaca ama qulqulka si loo siiyo kuleylka lagama maarmaanka u ah kalluumeysiga. Si loo gaaro xulashada wanaagsan ee falcelinta kiimikada dhammaan qaybaha fal-celiyayaashu waa inay la kulmaan heerkulka isku midka ah iyo bay'adda wax soosaarka leh. Falcelinta kuleylka jirka, heerka gaarsiinta kuleylka sidaas darteed waxay u baahan tahay inay ahaato mid isku mid ah intii suurtagal ah inta ka sarreysa mugga sariirta oo dhan. Labada socodsiinta, iyo qulqulka, iyo sidoo kale shucaaca, ayaa si dabiici ah ugu xaddidan awoodda ay u leeyihiin inay bixiyaan heerka lagama maarmaanka ah iyo isku mid ahaanta gaarsiinta kuleylka.
GB Patent 2210286 (GB '286), oo ah nooca caadiga ah ee farshaxanka hore, wuxuu baraa sii kordhitaanka walxaha yaryar ee koronto-dhaliyaha ah ee aan korantada ku shaqeyneynin taageerada macdanta ama doping kiciyaha si ay u siiso koronto ahaan. Taageerada macdanta ah ama maadada doping-ka ayaa ah kuleyl kuleyl ah oo kiciyana kiciyaha. Patent-kan wuxuu barayaa isticmaalka halbeegga ferromagnetic-ka ee maraya bartamaha sariirta dardargelinta. Waxyaabaha la doorbido ee xudunta ferromagnetic waa birta silikoon. In kasta oo ay waxtar u leedahay falcelinta illaa illaa 600 digrii C, qalabka GB Patent 2210286 waxaa ku dhaca xaddidaad daran oo heer kulka sare ah. Baaxadda magnetic ee xudunta ferromagnetic-ka ayaa si aad ah hoos ugu dhici doonta heerkulka sare. Sida laga soo xigtay Erickson, CJ, "Buug-gacmeedka kululaynta warshadaha", pp 84-85, soo-celinta magnetic ee birtu waxay bilaabaysaa inay hoos u dhacdo 600 C oo ay si wax ku ool ah u dhaafto 750 C. Maaddaama, isku-dubaridka GB '286, magnetic berrinka sariirta kalluumeysiga waxay kuxirantahay soojiidashada magnetka ee xudunta ferromagnetic, qaabka noocan ah si wax ku ool ah uma kululeyn doono hawo heerkulka ka sarreeya 750 C, iskaba daa inuu gaaro wax ka badan 1000 C oo looga baahan yahay soosaarka HCN.
Qalabka GB Patent 2210286 ayaa sidoo kale la rumaysan yahay in kiimikaad ahaan uusan ku habboonayn diyaarinta HCN. HCN waxaa lagu sameeyaa fal-celinta ammonia iyo gaaska hydrocarbon. Waxaa la ogyahay in birtu keento kala-baxa ammonia heerkulka sareeya. Waxaa la rumeysan yahay in birta ku jirta halbeegga ferromagnetic iyo taageerada kiciyaha ee ku dhex jirta qolka falcelinta ee 'GB' 286 ay sababi karto kala daadashada ammonia ayna hor istaagi doonto, halkii ay ka ahaan laheyd kor u qaadista, falcelinta la doonayo ee ammonia oo leh hydrocarbon si loo sameeyo HCN.
Hydrogen cyanide (HCN) waa kiimiko muhiim ah oo leh adeegsiyo badan warshadaha kiimikada iyo macdanta. Tusaale ahaan, HCN waa shey ceyriin ah oo loogu talagalay soosaarka adiponitrile, acetone cyanohydrin, sodium cyanide, iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee soo saarista sunta cayayaanka, wax soo saarka beeraha, wakiilada shahwada, iyo quudinta xoolaha. HCN waa dareere sun ah oo aad u saraysa kuna karkaraya 26 darajo C., iyo sida oo kale, waxay ku xiran tahay xirmooyinka adag iyo xeerarka gaadiidka. Codsiyada qaarkood, HCN waxaa looga baahan yahay meelo fog fog oo ka fog xarumaha wax soo saarka ballaaran ee HCN. U raridda HCN meelahan oo kale waxay ku lug leedahay khataro waaweyn. Soo-saarista HCN ee goobaha loogu talagalay in lagu isticmaalo ayaa ka fogaan doonta khataraha ay kala kulmaan gaadiidkiisa, keydkiisa, iyo maarayntiisa. Waxsoosaarka yar ee goobta laga soo saaro ee HCN, iyadoo la adeegsanayo habab farshaxanno hore, ma noqon doonto mid dhaqaale ahaan suuragal noqon karto. Si kastaba ha noqotee, miisaan yar, iyo sidoo kale baaxad weyn, wax soo saarka goobta ee HCN farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba waa macquul iyadoo la adeegsanayo habsami u socodka iyo aaladaha ikhtiraaca hadda jira.
HCN waa la soo saari karaa marka iskudhafyada ay kujiraan hydrogen, nitrogen, iyo kaarboon la isu geeyo heerkul sare, hawo ama hawo la'aan. Tusaale ahaan, HCN waxaa sida caadiga ah sameeya falcelinta ammonia iyo hydrocarbon, falcelin heer kul-kuleed heerkeedu sareeyo. Saddexda geeddi-socod ee ganacsi ee samaynta HCN waa Blausaure aus Methan und Ammoniak (BMA), Andrussow, iyo Shawinigan. Nidaamyadan waxaa lagu kala sooci karaa habka abuurista kuleylka iyo wareejinta, iyo in kalluumeysato la shaqeysiiyo iyo in kale.
Nidaamka Andrussow wuxuu adeegsadaa kuleylka ka dhashay gubista gaaska hydrocarbon iyo oksijiinta ee ku jirta mugga fal-celinta si loo siiyo kuleylka falcelinta. Nidaamka 'BMA' wuxuu adeegsadaa kuleylka ka dhashay habka gubashada dibedda si uu u kululeeyo dusha sare ee darbiyada fal-celinta, taas oo iyaduna kululaysa dusha sare ee gidaarka fal-dambiyeedka oo sidaasna ku bixisa kuleylka fal-celinta. Nidaamka Shawinigan wuxuu adeegsadaa koronto ku socota koronto oo sariir dheecaan leh sita si loo siiyo kuleylka falcelinta.
Nidaamka Andrussow, isku-darka gaaska dabiiciga ah (isku-darka gaaska hydrocarbon ee ku badan methane), ammonia, iyo oksijiin ama hawo ayaa lagu falceliyaa joogitaanka kalluumeysiga platinum. Hantidhowrka ayaa sida caadiga ah ka kooban dhowr lakab oo faashad silig ah oo ah platinum / rhodium. Tirada oksijiinta ayaa ah in gubashada qayb ka mid ah fal-celiyayaashu ay siiso tamar ku filan si loogu diiriyo fal-celiyaasha heerkulka hawlgalka ee ka badan 1000 ° C. iyo sidoo kale kuleylka loo baahan yahay ee falcelinta sameynta HCN. Wax soo saarka falcelinta waa HCN, H2, H2O, CO, CO2, iyo raadadka qiyamka nitrites ka sareeya, oo markaa la kala saarayo.
Nidaamka BMA, isku dar ah ammonia iyo methane waxay ku qulqulayaan gudaha tuubooyinka dhoobada aan dillaacsanayn ee laga sameeyay maadada diirimaadka heerkulka sare. Tubbo kasta gudaheeda waxaa lagu dhejiyay ama lagu dahaadhay waxyaabo ka kooban platinum. Tuubooyinka waxaa la geliyaa foornada heerkulka sare oo dibedda ayaa loo kululeeyaa. Kuleylka waxaa lagu maraa darbiga dhoobada ilaa dusha sare, taas oo ah qayb muhiim u ah derbiga. Falcelinta waxaa sida caadiga ah lagu sameeyaa 1300 ° C. maaddaama jawaab-bixiyeyaashu ay la xiriiraan soosaaraha. Qulqulka kuleylka loo baahan yahay waa mid sareeya sababo la xiriira heerkulka falceliska oo sareeya, kuleylka weyn ee falcelinta, iyo xaqiiqda ah in coking dusha sare ee kiciyeyaashu ay ku dhici karaan wax ka hooseeya heerkulka falcelinta, taasoo fureysa kiciyaha. Maaddaama tuubo kasta ay caadi ahaan tahay 1 diameter dhexroor, tiro badan oo tuubooyin ah ayaa loo baahan yahay si loo buuxiyo shuruudaha wax soo saarka. Wax soo saarka falcelintu waa HCN iyo hydrogen.
Nidaamka Shawinigan, tamarta looga baahan yahay falcelinta isku darka ka kooban propane iyo ammonia waxaa bixiya koronto qulqulaya inta u dhaxeysa korantada oo lagu quudiyay sariir dheecaan leh oo ka mid ah walxaha coke-ga aan-ka-baxsaneyn. Maqnaanshaha kiciye, iyo sidoo kale maqnaanshaha oksijiin ama hawo, howsha Shawinigan waxay ka dhigan tahay in falcelinta lagu wado heerkul aad u sarreeya, sida caadiga ah in ka badan 1500 darajo C. Heerkulka sare ee loo baahan yahay xitaa caqabado waaweyn ayaa qalabka dhismaha ee hawsha.
In kasta oo, sida kor lagu soo sheegay, la og yahay in HCN lagu soo saari karo falcelinta NH3 iyo gaaska hydrocarbon, sida CH4 ama C3H8, iyadoo ay joogaan shirkad birta ka shaqeysa, haddana weli waxaa jira baahi loo qabo in lagu hagaajiyo waxtarka hababka noocan oo kale ah, iyo kuwa la xiriira, si loo hagaajiyo dhaqaalaha wax soo saarka HCN, gaar ahaan wax soo saarka yar. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la yareeyo isticmaalka tamarta iyo horumarka ammonia iyadoo la kordhinayo heerka wax soo saarka HCN marka la barbardhigo xaddiga kalluumeysatada qaaliga ah ee la isticmaalay. Intaa waxaa sii dheer, kalluumeysatadu waa inaysan waxyeello u geysan wax soo saarka HCN iyadoo la dhiirrigelinayo fal-celinta aan loo baahnayn sida coking. Intaas waxaa sii dheer, waxaa la doonayaa in lagu wanaajiyo waxqabadka iyo nolosha kiciyeyaasha loo isticmaalay hawshan. Muhiimad ahaan, qayb weyn oo ka mid ah maalgashiga wax soo saarka HCN ayaa ku jira soosaarida kooxda platinum. Hal-abuurka hadda jira wuxuu si toos ah u kululeeyaa kalluumeysiga, halkii uu si aan toos ahayn uga dhigayo farshaxannadii hore, oo sidaas buu ku fuliyaa himilooyinkan.
Sidii hore looga wada hadlay, kuleylka kuleylka soo noqnoqda ee aadka u hooseeya waxaa loo yaqaanaa inuu bixiyo isku-xirnaan wanaagsan oo gaarsiinta kuleylka heerarka awoodda sare ee walxaha leh dariiqyo kala-soocid koronto oo aad u dheer. Markaad siineyso tamarta falcelinta wejiga gaaska ee kululeynta falcelinta kicinta, kuleylka wuxuu u baahan yahay in si toos ah loogu geeyo keydiyaha tamarta luminta ugu yar. Shuruudaha isku-xirnaanta iyo gaarsiinta kuleylka wax-ku-oolka ah ee dusha sare, isku-darka gaaska-gaaska ayaa u muuqda inay isku dhacayaan awooda kuleylka kuleylka. Hal-abuurka hadda jira wuxuu ku saleysan yahay natiijooyin lama filaan ah oo laga helay qaab-dhismeedka fal-celiyaha kaas oo soo-saaraha uu leeyahay qaab dhismeed cusub. Qaab-dhismeedka qaabkani wuxuu isku daraa astaamaha: 1) dherer waddo marin biyood oo wax ku ool ah oo dherer ah, taas oo sahleysa kuleylka tooska ah ee soo-kicinta kiciyaha ee qaab isku mid ah, iyo 2) xoojiye leh aag dusha sare ah; astaamahani waxay iska kaashadaan sidii loo fududeyn lahaa falgalka kiimikada kuleylka leh. Biro la'aanta buuxda ee qolka falcelinta waxay sahlaysaa soo saarista HCN falcelinta NH3 iyo gaaska hydrocarbon.
Soosaarayaasha maraakiibta kululaynta